Idphoto4you Passport अनलाइन को लागी फोटो को आकार को कम गर्दछ ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | सफ्टवेयर
पैसा खर्च नगरीकन, तपाई सजिलैसँग राहदानी आकारको फोटोहरू जुन देश र फोटो सूचिहरूमा आधारित छ फोटो काट्नको लागि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं भिसा वा अन्य औपचारिकताहरूको लागि राहदानी आकारको फोटोमा छवि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ र घरमा राहदानी-साइज फोटो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै धन्यवाद सहित राहदानी आकार फोटोहरु को सिर्जना को लागी IDphoto4You.com यसले धेरैको कामलाई सजिलो बनाउँछ।
Idphoto4you, एक सरल अनलाइन वेब अनुप्रयोग हो जुन तपाईंलाई पासपोर्ट फोटोहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ सटीक साइज सीमाको साथ र पैसा खर्च नगरीकन अनलाइन। तपाईलाई सबै डिजिटल क्यामेरा चाहिन्छ, तपाई फोटो लिनुहुन्छ, अपलोड गर्नुहोस् र त्यसपछि पासपोर्ट-प्रकारको फोटो प्राप्त गर्न आईडफोटो y यु सेवाको चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
1 कसरी डिजिटल क्यामेराबाट पासपोर्ट आकारका फोटोहरू लिने
2 स्पेनमा पासपोर्ट फोटो आकार
3 के DNI को फोटो र राहदानी एकै हो?
4 स्पेनमा पासपोर्ट फोटो आवश्यकताहरू
5 कसरी फोटो अनलाइन पासपोर्ट आकारमा रूपान्तरण गर्ने (तपाईं अनुप्रयोग वा वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ)।
कसरी डिजिटल क्यामेराबाट पासपोर्ट आकारका फोटोहरू लिने
यहाँ एक सरल टिप छ, तपाईं सेतो पृष्ठभूमि हुनुपर्दछ र छवि क्रप गर्न टाउको वरिपरि पर्याप्त ठाउँ छोड्नु पर्छ। यो पनि निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको अनुहार वा पृष्ठभूमिमा छाया छैन, क्यामेरा तपाईंको टाउको जस्तो उचाईमा पनि प्रयोग गर्नुहोस्।
यस अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न रोक्नुहोस् जुन तपाईंलाई सूची बनाउन मद्दत गर्दछ राहदानीको लागि तपाईको फोटो, यो कानूनी प्रक्रियाको लागि सहि आकारको साथ।
स्पेनमा पासपोर्ट फोटो आकार
स्पेनमा राहदानीका लागि फोटोहरू जहिले पनि आवश्यकताहरूको एक श्रृंखला पूरा गर्नुपर्दछ, जुन हामी तल कुरा गर्नेछौं। यद्यपि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक भनेको फोटोको आकार हो। जस्तो तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ, जब हामी तस्विर लिनको लागि कुनै ठाउँमा जान्छौं, यो मेशिन वा फोटोग्राफर हो, यो फोटोहरू राहदानीका लागि जहिले पनि निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ। किनकी तिनीहरूको खास आकार छ।
स्पेनको मामलामा, जसरी सरकार आफैंले स indicated्केत गर्दछ, यी फोटोहरूको आकार 35 40 र mm० मिलिमिटर चौडा र आनुपातिक रूपमा उच्च हुनुपर्छ, अर्थात, and० र mm 40 मि.मी. बीचको उचाई। यो कुनै पनि समयमा स्वीकार गरिएको छैन कि फोटोहरू यस भन्दा सानो थिए। थप रूपमा, तिनीहरूमा, टाउको र शरीरको माथिल्लो भाग फोटोको 70० र %०% बीचमा हुनुपर्दछ।
के DNI को फोटो र राहदानी एकै हो?
धेरै केसहरुमा, त्यहाँ मानिसहरु छन् जो ती दुबै कागजातमा उही फोटोहरू प्रयोग भएको छ। तपाईंको आईडी र तपाईंको राहदानीमा सायद तपाईंको उही फोटो छ, त्यसैले सिद्धान्तमा यो सम्भव छ। वास्तविकता यो हो कि यो प्रत्येक केसमा धेरै निर्भर गर्दछ, किनकि DNI नवीकरण गर्दा, नयाँ फोटो जहिले पनि अनुरोध गरिन्छ, जुन अघिल्लो भन्दा फरक छ। यदि तपाईंले DNI नवीकरण गर्नुभयो र त्यसपछि तपाईं राहदानी नविकरण गर्दै हुनुहुन्छ भने, सम्भवतः तिनीहरूले तपाईंलाई DNI को फोटो प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछन्। तर यो त्यस्तो हुँदैन जुन सबै केसहरूमा हुन्छ।
आईडी फोटोहरूको मामलामा, यो सामान्यतया स्थापित हुन्छ कि साइज जुन by२ बाय २ 32 मिलिमिटर हुनै पर्छ। यो कुरा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा देखाइएको छ। त्यसकारण तिनीहरू प्राय जसो राहदानीहरू भन्दा सानो हुन्छन्। तर केहि समय हामी DNI को लागी प्रयोग गरेको तस्बिरको साथ हुन्छ र यसले हामीलाई राहदानी नवीकरण गर्न दिन्छ।
स्पेनमा पासपोर्ट फोटो आवश्यकताहरू
जस्तो कि हामीले अगाडि उल्लेख गर्यौं, राहदानी तस्विरको प्राय: स्पेनको मामिलामा केहि आवश्यकताहरू हुन्छन्। यदि यी आवश्यकताहरू पूरा भएन भने, फोटो उपयोगी छैन र स्वीकार गरिने छैन। यी आधारभूत पक्षहरू हुन्, तर यो कुनै पनि हालतमा पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ, भनिएको फोटोको साथ समस्याहरूबाट बच्न। तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ?
भर्खरको फोटो: months महिना भन्दा पुरानो हुन सक्दैन
टाउको र शरीरको माथिल्लो भाग फोटो को 70० र %०% बीचमा हुनु पर्छ
पृष्ठभूमि सेतो र एकसमान हुनुपर्दछ
फोटो रंग र केन्द्रित हुनु पर्छ
फोटो क्वालिटी पेपरमा छाप्नु पर्छ
व्यक्तिले सिधा क्यामेरा हेराई छोड्नु पर्छ
आँखा खुला हुनु पर्छ र यदि चश्मा प्रयोग गरियो भने तिनीहरू स्पष्ट गिलासको हुनु पर्छ
टोपी, टोपी, स्कार्फ वा भिजरको साथ फोटोहरू स्वीकार गरिदैन
घुम्टो लगाएको मामलामा, तपाईं कुनै पनि केसमा आफ्नो अनुहार स्पष्ट देख्न सक्षम हुनुपर्दछ
बच्चाको फोटोहरूका लागि जुन टाउकोमा समात्नु पर्छ, कुनै पनि हात टाउको समातेर देख्न सकिदैन
कसरी फोटो अनलाइन पासपोर्ट आकारमा रूपान्तरण गर्ने (तपाईं अनुप्रयोग वा वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ)।
यदि तपाईंसँग पहिले नै फोटो छ, तर यो आवश्यक ढाँचामा छैन भने हामी त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्दछौं। ताकि हामीसँग पहिले नै छ तस्विर जुन उनीहरूले हामीलाई पासपोर्टमा सोध्छन्। यसको लागि, हामी वेब पृष्ठहरू वा अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नेछौं, जसले हामीलाई आकार परिमार्जन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, जस्तो कि पेन्ट जस्तो उपकरणको उपयोगले पनि मद्दत गर्न सक्दछ, यदि हामीलाई भनिएको फोटोमा नाप्ने उपायहरू पहिले नै थाहा छ भने।
सब भन्दा पूर्ण विकल्प मध्ये एक भिसाफोटो हो, जुन तपाईं यो लिंकमा भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। यस वेबसाइटमा धेरै देशहरूको राहदानी, आईडी वा भिसाका लागि फोटोहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ। त्यसोभए हामी सजिलैसँग सबै कुराको लागि अनुकूल गर्छौं जुन हामी त्यस अर्थमा खोजिरहेका छौं। हामीले भर्खरै एउटा फोटो अपलोड गर्नुपर्नेछ, जसको पृष्ठभूमि पनि हुन सक्छ। यस वेबसाइटका लागि धन्यबाद हामी फोटोलाई उत्तम पासपोर्ट फोटोमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं।
यदि तपाईले खोज्नु भएको कुरा एन्ड्रोइडका लागि अनुप्रयोग हो, त्यहाँ विकल्पहरू पनि उपलब्ध छन्। हामीसँग पासपोर्ट आईडी फोटो सम्पादक भनिने एक अनुप्रयोग छ, जुन तपाईं सजिलैसँग आफ्नो आईडी वा राहदानीको लागि फोटोहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सजिलो छ, तपाईंले केवल फोटो अपलोड गर्नुपर्नेछ र यसलाई सम्पादन गर्नुपर्नेछ। तपाईं तल Android मा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
पासपोर्ट र भिसा आईडी फोटो सम्पादक
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » Idphoto4you Passport अनलाइन को लागी फोटो को आकार को कम गर्दछ
नाटन सावेद्रा भन्यो
लेख को लागी धन्यवाद। म सामाजिक दूरी को समयमा कागजातमा फोटो कहाँ लिने भनेर खोज्दै थिए। उनको सल्लाहको लागि, उनले भिसा फोटो प्रयोग गरे। अब देखि, म सँधै यी फोटोहरू अनलाइन मात्र लिन्छु, यो अति सुविधाजनक छ!
नातान सावेद्रालाई जवाफ दिनुहोस्